UMaMkhize weRoyal AM ukhuthaza abalandeli ngokugoma
USHAUWN Mkhize unxuse abalandeli ukuthi bayogoma ukuze bezokwazi ukubuyela enkundleni Isithombe: BACKPAGEPIX
Mthokozisi Mncuseni | October 11, 2021
UMENGAMELI weRoyal AM ongusomabhizinisi waseThekwini, uShauwn Mkhize, usekhathele ukugxuma yedwa enkundleni njengoba abafana bakhe benza kahle kwiDStv Premiership kulezi zinsuku yingakho ekhuthaza abalandeli ukuba bayogomela i-Covid-19.
Lesi sikhulu esifike kwazwakala esigabeni esikhulu sePremier Soccer League (PSL), sesizakhele olunye udumo ngokubonakala sidansa nendodana engusihlalo (u-Andile Mpisane) nabangani kuyona yonke imidlalo yeThwihli Thwahla.
IRoyal AM isendaweni yesithathu kwi-log kulandela ukunqoba kwayo imidlalo emine kweyisithupha yeligi. Isinamaphuzu ayisishiyagalolunye.
UMaMkhize okuyigama lesi sikhulu sebhola esesidume ngalo kulandela uhlelo lwaso lwakuthelvishini, ubesohlelweni lwasekuseni kwi-eNCA olwaziwa nge-The South African Morning ngoMsombuluko.
Phakathi kwezinto eziningi abekhuluma ngazo uMaMkhize ubalule ubumqoka bokuthi abathandi bebhola bagomele i-Covid-19 ukuze iziphathimandla zizophoqeleka ukubavumela ukuthi bangene ezinkundleni.
“Sengikhathele ukugxuma ngedwa ikakhulukazi njengoba abafana bami benza kahle kanje kulezi zinsuku,” usho kanje.
“Ngabe ngiqamba amanga, akumnandi uma kungekho balandeli enkundleni ngakho-ke ngibona kuwumqondo omuhle ukuthi sivele siye ngobuningi bethu ukuyogoma ukuze sibavalele ekhoneni laba okuyibona abathatha izinqumo,” kuqhuba uMaMkhize kwi-eNCA.
“Ngaphandle kwebhola, kuningi okufanele sikugomele ngoba nabantu bakithi esibathandayo sebebaningi kakhulu abasishiyile ngenxa yalolu bhubhane.
“Kunenkinga yabantu abaphelelwa imisebenzi ngakho-ke asiye sonke siyogoma ukuze nomnotho wezwe uzozama ukubuyela esimeni, sibuyelwe nayimpilo yethu,” kusho yena.
Uphawule kafushane ngothando lwebhola aluchaza njengento okufanele uyizwe ukuze uyiqonde.
“Bengingeyena umuntu webhola kodwa indodana yami iyona ebizifela ngalo kusukela ebuncaneni bayo. Ngingakusho ngingasabi ukuthi selingingenile.
“Okuhle ngalo ukuthi kule mizuzu engu-90 awubin aso ngisho esincane isikhathi sokucabanga ngezinkinga obhekene nazo,” kulandisa lesi sikhulu.
IRoyal AM izobuya ekhefini leFifa ngokuvakashela iMarumo Gallants okumapeketwane kuyona kulandela ukuxosha umqeqeshi ngeSonto.
Ngemuva kwendlala yezinyanga ezicela kwezingu-18, kulindeleke ukuthi umdlalo weBafana Bafana ne-Ethiopia wokuhlungela iNdebe yoMhlaba ngoLwesibili ntambama uhanjelwe abalandeli abangu-2000.
NgokweSafa ephethe ibhola kuleli, umbandela uthi bonke laba balandeli abazongena mahhala enkundleni, kufanele kube ukuthi bayigomele I-Covid-19.